Indawo Yokuphumula Edolobheni e-SeaWind - I-Condo Enesitayela Enamakamelo okulala angu-2 - I-Airbnb
Indawo Yokuphumula Edolobheni e-SeaWind - I-Condo Enesitayela Enamakamelo okulala angu-2
Davao City, Davao Region, i-Philippines
I-ifulethi ephelele ibungazwe ngu-Jay
Ukukhanya nokukhanyayo, lena yindawo esesitayeleni eyakhiwe njengendawo ekahle kakhulu yasedolobheni. Inezindawo eziningi zokusebenzela ezinethezekile ne-wifi kulabo abangakwazi ukunqamuka nhlobo futhi kulabo abathanda nje ukunethezeka, i-TV ehlakaniphile kanye nezihlalo ze-balcony alcove. Kukhona ikhishi elihle, elisebenzayo labathandi bokudla kanye nendawo yokubhukuda enhle phansi enelanga elihle lasekuseni. Imizuzu engu- kuphela ukuya e-Samal Island Ferry kanye nokuhamba okufushane kwe-cab ukuya enxanxathela yezitolo zendawo, lena yindawo ekahle kakhulu yeholide lakho elilandelayo!
Siye sasungula futhi sasungula le ndawo futhi siyaziqhenya kakhulu uma kunjalo! Sifake zonke izinto ezithandwayo ekhaya futhi sithemba nje ukuthi abanye bayakuthanda okokuzithokozisa kokuhlala kule ndawo enhle njengathi!
Inxanxathela yezitolo zokuthenga zasendaweni, i-Massang, imayelana nemizuzu engu-20 ngetekisi futhi inezitolo eziningi zokugqoka, ezinye izindawo zokudlela ezithandekayo, izitolo zekhofi (amaketanga omhlaba wonke), i-bowling alley kanye ne-cinema.
Kunesitolo esilula esitholakala ngezinyawo ezimfushane ukusuka ku-condo esihle kakhulu sezinto eziyisisekelo.
Indawo ye-condo yethu iseduze kakhulu nesikhumulo sezindiza, nokuyinto enhle kakhulu ukuba kube lula kodwa futhi kusho ukuthi uzobhekana nomgwaqo ohamba emoyeni. Thina ngokwethu asikutholi sikhathaza kakhulu. Indiza yokugcina ingaba ngu-11pm kusihlwa.
Asihlali e-Davao - lena yindawo yethu yokuphumula futhi - kodwa sineqembu elihle elinakekela izivakashi zethu e-Davao futhi sihlezi sitholakala ukuze sithole amacebiso nalabo abavakashela enye yezindawo zethu eziyintandokazi!
Hlola ezinye izinketho ezise- Davao City namaphethelo